कोभिडविरुद्ध बीसीजी खोप परीक्षण:: Naya Nepal
कोभिडविरुद्ध बीसीजी खोप परीक्षण
लन्डन : बेलायती वैज्ञानिकहरूले कोभिड–१९ बाट बचाउन बीसीजी खोपले काम गर्न सक्छ कि भनेर परीक्षण सुरु गरेका छन्। क्षयरोग (टीबी) नियन्त्रण गर्न सन् १९२१ मा यो खोप आविष्कार गरिएको थियो। कोरोनामा पनि यो उपयोगी हुने केही प्रमाण फेला पारेको उनीहरूले बताएका छन्।
युनिभर्सिटी अफ एक्सेसरको उक्त ‘ट्रायल’ मा हजार जनाले भाग लिँदै छन्। बेलायतका दसौं लाख व्यक्तिले सानैमा बीसीजी खोप लिएका छन्। हाल महामारी बनेको कोरोनाबाट जोगिन उक्त खोप पुनः लिनुपर्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यो खोपमा कुनै पनि संक्रमणविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च बनाउने गुण छ। त्यही कारण कोरोनासँग लड्न पनि फलदायी हुने आकलन गरिएको छ।
बीसीजी खोपका कारण क्षयरोग रोकथाम मात्र भएको छैन, बेलायतमा नवजात शिशुलाई निमोनियाजस्ता रोगबाट समेत जोगाउन सघाएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा यसले नाक, घाँटी र फोक्सोमा हुने संक्रमण ७३ प्रतिशत घटाएको पाइएको छ। जब कि नेदरल्यान्डमा बीसीजीले जन्डिस ज्वरोको भाइरसलाई घटाएको छ। ‘बीसीजी खोप विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ’, युनिभर्सिटी अफ एक्सेसरका प्रोफेसर जोन क्याम्पबेलले भने, ‘कोरोनाविरुद्ध लड्न यो उपयोगी हुन सक्छ।’
आमिर खानकी २३ वर्षीया छोरीको खुलासाः ‘४ वर्षदेखि डिप्रेशनमा छु’
आमिर खान र उनकी जेठी श्रीमती रिना दत्ताकी छोरी इरा खान विगत चार वर्षदेखि क्लिनिकल डिप्रेशनसँग जुधिरहेकी छिन् । यो खुलासा इरा आफैले सोसल मिडियामार्फत् गरेकी हुन् । शनिबार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको मौकामा उनले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो कुरा राखेकी हुन् ।
‘म चार वर्षदेखि डिप्रेशनमा छु’
भिडियोमा इरा भन्छिन्, ‘हाय ! म डिप्रेस्ड छु । म चार वर्षदेखि डिप्रेशनमा छु । म डाक्टरकोमा पनि गएकी थिएँ । म क्लिनिकल्ली डिप्रेस्ड हुँ । तर अब म राम्रो महसुस गरिरहेकी छु र पछिल्लो एक वर्षदेखि मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा केही गर्न चाहिरहेकी थिएँ । तर बुझ्न सकेकी थिइनँ कि के गरुँ ।’
‘त्यसैले मैले निश्चित गरेँ कि तपाईंलाई आफ्नो यात्रामा लिएर जाने । हेरौं अब के हुन्छ । आशा छ कि हामीले आफैंलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नेछौं । मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछौं । आउनुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गरौं जहाँबाट मैले सुरुवात गरेकी थिएँ । म के कुराले डिप्रेस्ड हुँ ? म डिप्रेस्ड हुने को हुँ ? मसँग त सबैकुरा छ नि, हैन ?’
‘कुराकानी सुरु गरौं’
भिडियोको क्याप्सनमा इराले लेखेकी छिन्, ‘धेरै कुरा चलिरहेको छ ? धेरै मानिसहरुले धेरै कुरा भनिरहेका छन् । कुराहरु साँच्चै नै भ्रामक र तनावपूर्ण र सजिलो छन् र ठिक छन्, तर ठिक छैन । जीवन सबैसँग छ ।’
थिएटर डेब्यू गरिसकेकी छिन्
२३ वर्षकी इराले गत वर्ष ‘युरिपाइड्स मेडिया’ नामको नाटकबाट थिएटरमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले यो नाटकलाई निर्देशन गरेकी थिइन् । यसै शोमार्फत् वरुण धवनकी भतिजी अंजिनी धवनले नायिकाको रुपमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
कोरोना भाइरसको कारण लगाइएको लकडाउनपछि धेरै मानिसहरु अझैपनि घरबाट नै काम गरिरहेका छन् भने अनलाइन कक्षा समेत सचालन भईरहेको छ ।
जसले गर्दा यस अवधिमा इन्टरनेटको उपयोग पनि धेरै गुणा बढेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन गेमिग वर्क फ्रम होम,, र मनोरन्जनका लागि स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरूमा भिडियोहरू हेर्नका लागि इन्टरनेटको पनि धेरै प्रयोग गरिरहेका छन्।
यद्यपि, पहिलेको भन्दा धेरै इन्टरनेटको प्रयोगले पनि इन्टरनेटको अपलोड र डाउनलोड गतिमा समस्या देखिरहेको छ ।
यहि कारणले गर्दा मानिसहरु इन्टरनेटको स्पीड कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर तनाबमा छन् ।
इन्टरनेट गति कसरी जाँच गर्ने ?
डेस्कटप वा ल्यापटपमा इन्टरनेट गति जाँच गर्न, तपाईले वेब ब्राउजरमा जानु पर्छ र कुनै पनि स्पीड परीक्षण गर्ने वेबसाइट जस्तै स्पीडटेस्टनेट वा फास्ट डट कममा जानु पर्छ।
यसपछि, तपाईं स्वचालित रूपमा डाउनलोड र अपलोड गति देख्नुहुनेछ। मोबाइलमा, तपाईं यी साइटहरू ब्राउजरमा खोल्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं गूगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोरबाट एप्स डाउनलोड गरेर पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ।
वाईफाई गति यसरी राम्रो हुनेछ
यदि तपाइँ घरबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ र उदाहरणका लागि तपाइँको २ एमबीपीएस योजनाको अधिकतम गति १०० एमबीपीएस छ भने तपाइँले वर्कलोडको कारण अधिकतम गति पाउनुहुने छैन।
यस्तो अवस्थामा तपाइँले ईन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकताअनुसार उत्तम प्लान छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यसका अतिरिक्त, धेरै बेरसम्म निरन्तर अनलाईनका कारण राउटर तातो हुन्छ र कयौं अपरेशनल इश्यू आउँदछन्। यस अवस्थामा, वाईफाई राउटर रिबुट गर्ने काम गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
यदि यसपछि पनि स्पीड राम्रो छैन भने, त्यसपछि तपाईंले कम थोरै डिभाइसहरु मात्र एक पटकमा कनेक्ट गर्नुपर्छ, यस तरिकाले पनि तपाईंले अझ राम्रो इन्टरनेट स्पीड पाउनुहुनेछ।
साथै, यदि वाईफाईमा कनेक्टभएको कुनै डिभाइस अपडेट हुँदैछ भने, अन्य डिभाइसहरूमा स्पीड द्रुत रूपमा कम हुनेछ। यसमा पनि ध्यान दिनुहोस्।
मोबाइल डाटाको गति कसरी बढाउने
सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् यदि तपाईंको मोबाइल डिभाइसले पूरा सिग्नल पाइरहेको छ कि छैन, यसले स्पीडलाई असर गर्छ।
जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले दैनिक डाटा लिमिट समाप्त गर्नुभएको त छैन् ? धेरै पटक मोबाइल डाटामा गेम खेल्दा वा चलचित्र हेर्दा केही घण्टामा डाटा प्लान समाप्त हुन्छ र स्पीड घट्छ।
धेरै पटक डिभाइसको फ्लाईड मोड बन्द गरिसकेपछि खोल्नाले राम्रो स्पीड प्रदान गर्दछ किनकि मोबाइल नेटवर्क फेरि नजिकको टावरमा कनेक्ट भएको हुन्छ।
तपाइँको मोबाइल अपडेटको बेलामा पनि स्पीड घट्छ, यस्तो समयमा ब्याकग्राउण्डमा एपहरू नचलेको र यदि त्यहाँ कुनै अपडेटहरू छैनन् भने मात्र तपाईंले राम्रो स्पीड पाउनुहुनेछ।
यस बाहेक कयौं पटक डिभाइसको नेटवर्क सेटिंग्स परिवर्तन गर्दा राम्रो स्पीड दिन्छ,तपाईं यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने उपकरणलाई रिबुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।